China Manicure Wepụ Gel Acrylics Nails Ngwa Ngwá Ọrụ 5 na 1 Tapered Drills Milling Cutter Safety Carbide Nail Drill Bits factory and suppliers |Yaqin
Manicure Wepụ Gel Acrylics Ntu Ngwa Ngwa Ngwa 5 na 1 Tapered Drills Milling Cutter Safety Carbide Ntu Drill Bits
Kedu ihe bụ mgbanaka ntu carbide?
Carbide ntu egwuru ihebụ ihe eji eme carbide dị elu, ya mere ọ nwere ogologo ndụ ọrụ.O nwere obere ihe iji mee ka ọ dị mfe ma sie ike.Anyị nwere ike nkọ, ire ụtọ na polishing gel na acrylic mbọ ngwa ngwa na nke ọma.Ọ dabara maka acrylic na ezigbo mbọ, dị mma maka ịkpụcha mbọ aka na pedicure, enwere ike iji ya ogologo oge.Ọ siri ike dị n'akụkụ diamond, ma dabara ọtụtụ igwe ntu na-eji 3/32 inch.
Atụmatụ nke carbide ntu drill bit?
Carbide ntu egwu egwudị mma na ejiji, Ọ nwere ike ịbanye na nsọtụ ntu ahụ iji hichaa cuticles na-enweghị ịcha mbọ, ọ nwere ike ichebe ma ghara imerụ ahụ gị ahụ, na-enye gị ahụmahụ ntu dị mma ma dị mma.Ntu ntu Carbide na-emepụta obere uzuzu na obere esemokwu na okpomọkụ.Ọ bụ onyinye zuru oke maka ụlọ ịsa ahụ na onye hụrụ nka ntu n'onwe ya n'anya n'ụlọ.
Uru anyị nke carbide nail drill bit?
1. Anyị nwere usoro njirimara akpọrọ 5 na 1Carbide ntu egwu egwu, n'ihi na ịdị arọ na-agbanwe site n'elu ruo n'ala, site na mma gaa na nke siri ike.Ntu ntu Carbide nwere ntụzịaka ntụgharị abụọ maka aka ekpe na aka nri.Ọ nwere ike wepụ mbọ aka acrylic, mbọ gel, ntụ ntụ ntụ na agba mbọ ọ bụla nwere oke arụmọrụ.Ọ dị ezigbo mma n'ịgwọ mbọ gel dị oke oke na hyper-keratosis.
2. Ogologo na-adịte aka ma dị mfe ihicha.Pụrụ iche eji contour, na-akpụzi elu na bevel, ebelata na backfill ọnwụ.
3. Ihe eji eme ihe ntu Carbideemebere ka ewepụrụ gel ntu ngwa ngwa, ọ gaghị emebi akpụkpọ gị na mbọ eke.Ha nwere ike na-eji maka polishing ntu elu na sidewalls na uko ebe, pụrụ iche eji contour, na-akpụzi elu, ebelata na backfill ọnwụ.
Nke gara aga: Onye na-emepụta China maka igwe ntu ntu ọkachamara - igwe ntu ntu kacha mma 35000RPM Efile ntu nwere ike ibugharị - Yaqin
Osote: Ngwa ntu Carbide Ntu Ntu Mma Mma Ntu Ntu Nkeonwe
Tungsten Carbide siri ike hexagon ịghasa ntu ntu ...
Tungsten Carbide Pear Shape Ntu Drill Bit